2 Tantara 13 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
2 Tantara 13:1-22
13 Ary tamin’ny taona fahavalo ambin’ny folo nanjakan’i Jeroboama Mpanjaka, no nanomboka nanjaka teo amin’ny Joda i Abia.+ 2 Telo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Mikaia,*+ zanak’i Oriela avy any Gibea.+ Ary nisy ady teo amin’i Abia sy Jeroboama.+ 3 Koa nitondra tafika nisy lehilahy mpiady+ voafantina efatra hetsy i Abia rehefa nandeha niady. I Jeroboama kosa nandahatra lehilahy voafantina matanjaka sy mahery fo+ niisa valo hetsy mba hiady tamin’i Abia. 4 Dia nitsangana teo amin’ny Tendrombohitra Zemaraima, any amin’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima,+ i Abia, ka niteny hoe: “Mihainoa ahy, ry Jeroboama sy Israely rehetra ô! 5 Tsy fantatrareo angaha fa nomen’i Jehovah Andriamanitry ny Israely fanjakana i Davida+ sy ny taranany,+ mba hitondra ny Israely mandritra ny fotoana tsy voafetra?+ Ary nataony fifanekena maharitra*+ izany. 6 Nikomy+ tamin’ny tompony+ anefa i Jeroboama,+ izay zanak’i Nebata sady mpanompon’i+ Solomona zanak’i Davida. 7 Ary nisy olona mpidonana-poana+ sady tsy manjary+ tonga nitangorona teo aminy. Nahery noho i Rehoboama zanak’i Solomona izy ireo. Mbola kely sady saro-tahotra+ mantsy i Rehoboama+ ka tsy nahatohitra an’ireo. 8 “Ary ankehitriny dia te hanohitra ny fanjakan’i Jehovah izay eo an-tanan’ny taranak’i Davida+ ianareo. Vahoaka be+ ianareo ary eo aminareo ireo zanak’omby volamena nataon’i Jeroboama ho andriamanitrareo.+ 9 Moa ve ianareo tsy efa nandroaka ny taranak’i Arona izay mpisoron’i Jehovah,+ mbamin’ny Levita, ka nanendry mpisorona ho anareo, tahaka ny fanaon’ny firenen-kafa?+ Ary izay tonga nanolotra vantotr’ombilahy iray sy ondrilahy fito mba hahazo ny fahefan’ny mpisorona, dia lasa mpisoron’izay tsy andriamanitra+ akory. 10 Fa ny anay kosa, i Jehovah no Andriamanitray,+ ary tsy nahafoy azy izahay. Mpisorona taranak’i Arona no manao fanompoana ho an’i Jehovah, ary toy izany koa ny Levita izay manao ny anjara raharahany.+ 11 Manolotra fanatitra dorana mba hidona-tsetroka ho an’i Jehovah isa-maraina sy isaky ny takariva+ izy ireo, ary mandoro emboka manitra.+ Ny mofo mifanaingina dia eo amin’ny latabatra vita amin’ny volamena tsy misy fangarony,+ ary ao amin’ny toerany koa ny fitoeran-jiro volamena+ sy ny jirony izay arehitra isaky ny takariva.+ Manao ny adidinay+ amin’i Jehovah Andriamanitray mantsy izahay, fa ianareo kosa efa nahafoy azy.+ 12 Ary mitarika anay ilay tena Andriamanitra+ sy ny mpisorony+ ary ny trompetra fanairana+ izay hotsofina rehefa hamely anareo izahay. Koa aza miady amin’i Jehovah Andriamanitry ny razanareo,+ ry zanak’Israely ô, fa tsy handresy ianareo.”+ 13 Ary nisy miaramila nirahin’i Jeroboama ka nasainy niafina hanafika avy any aorian’ny Joda. Koa teo anoloan’ny Joda ry Jeroboama, fa ireo miaramila niafina kosa no avy tany aoriana.+ 14 Ary rehefa nitodika ny miaramilan’ny Joda, dia indreo fa teo anoloany sy tao aoriany ny fahavalony.+ Koa nitaraina tamin’i Jehovah+ izy ireo, ary ny mpisorona nitsoka mafy ny trompetra. 15 Dia nanao hiakan’ady+ ny miaramilan’ny Joda. Ary rehefa nanao izany izy ireo, dia nataon’Andriamanitra resy+ teo anoloan’i Abia+ sy ny Joda i Jeroboama sy ny Israely rehetra. 16 Koa nandositra teo anoloan’ny Joda ny zanak’Israely. Ary natolotr’Andriamanitra teo an-tanan’ny+ Joda izy ireo, 17 dia nasian’i Abia sy ny miaramilany, ka be dia be no maty. Koa lehilahy voafantina dimy hetsy tamin’ny Israely no maty niampatrampatra. 18 Toy izany no nampietrena ny zanak’Israely, tamin’izany fotoana izany. Nahery kosa ny taranak’i Joda satria niantehitra+ tamin’i Jehovah Andriamanitry ny razany. 19 Ary nanenjika an’i Jeroboama i Abia ka naka an’ireo tanàna nofeheziny, dia i Betela+ sy ireo tanàna miankina aminy, Jesana sy ireo tanàna miankina aminy, ary Efraina sy ireo tanàna miankina aminy.+ 20 Tsy nanan-kery intsony+ i Jeroboama tamin’ny andron’i Abia. Ary namely azy i Jehovah+ ka maty izy. 21 Dia nihanahery+ i Abia. Ary rehefa nandeha ny fotoana, dia nanana vady efatra ambin’ny folo izy,+ ka niteraka roa amby roapolo lahy+ sy enina ambin’ny folo vavy. 22 Ary ny sisa amin’ny tantaran’i Abia, mbamin’izay nataony sy nolazainy, dia efa voasoratra ao amin’ny fitantaran’i Ido+ mpaminany.
^ “Maka” ao amin’ny 2Ta 11:20-22 sy 1Mp 15:2.